Thanksgiving agara ari chinyakare chaizvo zororo wokurarama kumativi mhuri, Teki, uye nhabvu. zvisinei, avo pakati penyu vanonakidzwa nekufamba uye vanogona kushandisa kukurumidza kutiza vanofanirwa kufunga kushandisa mwaka wezororo wegore rino mune rimwe remaguta akanakisa ekushanyira yekutenda kuEurope.
Europe Kazhinji rakawandisa kuvashanyi, asi mumwe havagoni kutaura zvakafanana kuti mukupera November. Ndicho chikonzero chikamu ichi chegore inguva yakakwana yekushanya maguta ekare uye tangazve tsika dzeKutenda nechikafu chakakura uye inoshamisa kudonha mavara.
Vaya iwe kuti funga chikafu kuti chinhu chinokosha Thanksgiving, iwe uchave nemugove wako wakanaka muLondon. Zvokudya Chiitiko pano zvinoorora uye sezvo dzakasiyana souya musana mumaguta makuru ari inoti. Kuchava chinhu nokuda wose kuravira.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-visit-thanksgiving-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)